Sezvo coronavirus itsva ukasha China, kusvikira madhipatimendi ehurumende, pasi vanhuwo zvavo, tiri Kingswel Machinery munzvimbo zvose inofamba upenyu, nhanho dzose vezvikwata zviri kushingaira dzingatevedzwa kuita basa muzvidzivirire dambudziko uye kuzvidzora basa rakanaka. Kunyange zvazvo fekitari kwedu kwete ...zvakawanda Read »
Dear Customer, Kingswel akagadzirira kutora chikamu mune 31th Chinaplas 2017 mu Guangzhou.The wakanaka kubva rechi16 kusvikira wa19 May. Nhamba yedu Dumba ndiye S01, Hall 11.1. Tinokutendai mose kutsigirwa uye kutarisirwa kuti Kingswel uye hatigoni kumirira kuona iwe musi Chinaplas. Best ari, Eric Xu zvakawanda Read »
The 2016 Chinaplas Booth Number nokuda Kingswel Machinery
Post nguva: Feb-22-2016
Vadikanwi vatengi uye neshamwari, Kingswel Machinery ari kutora chikamu mune 2016 Chinaplas wakanaka Shanghai. Dumba nhamba ruzivo iri pazasi. Tinokutendai mose rubatsiro uye kuvimba kuti Kingswel Machinery kwemakore akawanda kudaro. Hatigoni kumirira kuona iwe uri 2016 Chinaplas muShanghai. In add ichi ... zvakawanda Read »
Kingswel akagadzirira kutora chikamu mune 2015 Chinaplas
Post nguva: Apr-27-2015
Kingswel ari kutora chikamu mune 2015 Chinaplas muna Guangzhou. The pashoo nguva anobva May 20 kusvikira May 23. nhamba yedu dumba ndiyo 11.1 S65. Tariro kuona kwedu vatengi akwegura uye itsva ikoko! zvakawanda Read »